Booliska Kenya oo toogtay laba Ruux oo dhac u geystay Haweeney Soomaali ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Booliska Kenya oo toogtay laba Ruux oo dhac u geystay Haweeney Soomaali...
Ciidamo ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay toogtan laba Nin oo la sheegay inay ahaayeen Burcad dhac ka geysanayay wadada Muhoho ee deegaanka Lang’ata ee magaalada Nairobi.
Labada Nin ayaa xilliga la toognayay Waaxda dambi baarista dalka kenya ee DCI-da ay sheegeen inay Mobile & qakab kale oo qaali ah ka dhaceen Haweeney mareysay wadada Muhoho ee deegaanka Lang’ata, isla markaana ay is rasaaseeyeen Ciidamada Booliska.
Saraakiil ka tirsan Booliska ka howlgalla Magalada Nairobi ayaa waxaa ay sheegeen in raga Burcadda ah ee la toogtay laga qaaday Bustoolad iyo 5 wareeg oo rasaas ah.
Dilka Ciidamada Booliska Kenya ay u geysteen labda nine e burcaddda ahaa ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Maalmihii la soo dhaafay waxMagaalada ee Nairobi ku soo badanayeen burcadda xeeladaha kala duwan dadka ugu dhaca.
Previous articleWeerar madaafiic ah oo lagu qaaday Saldhig ku yaal Gobolka Shabeellaha Dhexe
Next articleGuddoomiyaha Mandheera oo sheegay inay kordheen weerrarada Al-Shabaab